Ngaba ulutsha lufanele lube nemisebenzi? - Imisebenzi Yolutsha
Isikolo Ukhuseleko Uphando Neendlela
Ngaba ulutsha lufanele lube nemisebenzi?
Njengokuba uqoqosho, intengiso yomsebenzi, kunye neenkolelo zabazali ziguquka, kunjalo ke nangeempikiswano malunga nokuba ukuqeshwa kolutsha kuluncedo okanye kuyingozi. Namhlanje, Iinkcukacha-manani bonisa inqanaba lokuqeshwa kwesikolo esiphakamileyo esihlala malunga neepesenti ezingama-20, ezibonisa ukuba imeko yangoku ilele phi ngesihloko.
Izibonelelo zeMisebenzi yoLutsha
Uninzi lwabazali, ootitshala kunye nolutsha luza kuthi ukusebenza ngexesha lesikolo esiphakamileyo kulungiselela abantwana ikamva labo. Ngelixa uninzi lwezi izibonelelo khange ziphandwe kakuhle, zixhaswa ngamava kunye nembali.
Inceda ukwakha ukuzithemba
Yomeleza izakhono zomsebenzi
Yenza amathuba othungelwano
Yongeza ingenisokumntu okanye usapho
Ufundisa ixabiso lemali
Imisebenzi ehlawulelwa kakuhle abaneminyaka eli-16 ubudala
Uyifumana njani imisebenzi yokuThengisa abantu abatsha
Ngokusekwe kwi- Uphononongo lolutsha olungaphaya kwe-1,500 oluhlelelekileyo , Umsebenzi wasehlotyeni okanye onxulumene nokoInkqubo yomsebenziunokunciphisa isimilo sobundlobongela ngolu lutsha ngaphezulu kwama-40 epesenti. Ulutsha oluxakekileyo, luziva lunenjongo kwaye luhlonitshwa, kwaye lunokubona ikamva eliqaqambileyo linezizathu ezingakumbi zokungazinxibelelanisi nokuziphatha okuyingozi. Nangona kungekho siqinisekiso sokuba umsebenzi uya kugcina ulutsha ngaphandle kwengxaki, kukho ubungqina obunokukunceda.
Uxela kwangaphambili impumelelo yexesha elizayo
Ulutsha olukhubazekileyo lujamelana nobunzima obongezelelekileyo ekufumaneni ingqesho enempumelelo njengabantu abadala, kodwa ingqesho ngexesha lesikolo esiphakamileyo inokunceda. Amava omsebenzi wesikolo samabanga aphakamileyo yenye yezo iingqikelelo eziphezulu zokufumana ingqesho yokhuphiswano emva kokuphumelela abantwana kwiinkqubo zemfundo ezizodwa. Ngokufanelekileyo, la mava obuchwephesha anika ulutsha ukuzithemba kunye nezakhono zomsebenzi ngelixa ikwabonisa nabaqeshi bexesha elizayo oko banako ukukwenza.
Iphucula ukuhamba isikolo kwabafundi
Ingabonakala ngathi iyaphikisana, kodwa ukuba nomsebenzi wehlobo kubonisiwe andise ukuhamba isikolo kwabafundi kancinci phakathi kolutsha oluneminyaka eli-16 nangaphezulu. Izakhono ezifundwe kwingqesho njengokulawulwa kwexesha kunye nokuqonda ukubaluleka kwemfundo ngokunxulumene nomsebenzi kunokunceda ulutsha lujonge isikolo njengeyona nto iphambili.
Iingxaki zeMisebenzi yoLutsha
Olunye ulutsha, abanonopheli, kunye nootitshala, imisebenzi yolutsha iza nokunye okuninzi iingxaki ngaphezu kwezibonelelo. Iziphumo ezibi zihlala zibonakala xa ulutsha:
Sebenza iiyure ezininzi
Yamkela imisebenzi enzima
Yiba neeshedyuli ezigcwele ezinye izinto ezenziwa emva kwekharityhulam
Thatha olunye uxanduva lwabantu abadala njengokukhathalela abantwana
Ithatha ixesha kude neMfundo
Abantu abadala abancinci banamhlanje baya kufuna ubuncinci isidanga seminyaka emine yasekholejini ukuze bafumane umsebenzi owoneleyo, kwaye oko kuthetha ukugxila ngakumbi kwimfundo. Ireyithi yengqesho yolutsha iye yehla kumashumi eminyaka. Ulutsha namhlanje lukhankanya isikolo njenge Isizathu esiphambili sokuba kutheni bengenamsebenzi . Ngeeklasi eziphambili, iikhosi zekholeji, kunye nomsebenzi wasekhaya wasehlotyeni, ulutsha alunalo ixesha elininzi lasimahla lasemva kwesikolo okanyeimisebenzi yasehlotyeninjengokuba babeqhele ukwenza.
Unokuthintela amabhaso oNcedo lwezeMali
Ngelixa usenokuba ugcina imali ukunceda ukuhlawula ikholeji, ukufumana umvuzo omninzi kunokukwenzakalisa ngokwezezimali. Isicelo sasimahla soNcedo lwaBafundi abaFundayo, okanye i-FAFSA, ithathela ingqalelo eyakhoIgalelo losapho elilindelekileyo(EFC) nini ukubala amabhaso ezemali . Ukuba wenza ngaphezulu kwe- $ 6,420, malunga nesiqingatha semali oyenzayo ngaphezulu kwelo bhentshi ubala usiya kwi-EFC yosapho lwakho. Ukuba unemivuzo ephezulu okanye ulondolozo, inokususa kuncedo lwezezimali olufumanayo.
Ubeka uxinzelelo kuLutsha
Ihlobo okanyeimisebenzi yexeshanaUnokuba negalelo kwi- Inqanaba loxinzelelo kulutsha . Inkqubo yokufikelela kubantu ongabaziyo, ukuvulela ukwaliwa, kunye noloyiko lokusilela zizinto zonke ezixhalabisayo kulutsha oluninzi oluqwalasele ingqesho. Ukuphazamiseka koxinzelelo zezi ezona ngxaki zixhaphakileyo zengqondo kulutsha, ichaphazela malunga neepesenti ezingama-40 zabemi.
Olunye ulutsha alunandlela yimbi ngaphandle kokusebenza ngelixa abanye bengenayo imfuneko yomsebenzi. Cinga ngobomi bakho kunye neenjongo zakho zekamva uze ubone ukuba umsebenzi ungena njani kwiminyaka yakho yokufikisa.
Imitshato Yomtshato Malunga Origami Online Games Iinkampani Ze-Inshurensi Udliwanondlebe Kwespecial Umdla
apho uza kunikela ngeglasi ezindala kufutshane nam
Inja iyeka nini ukukhula
Ubungakanani bekhekhe lephepha lekota
izinto ezipholileyo ukuqokelela abafana
yintoni efakiwe kwixabiso lokuhamba ngenqanawa
yintoni ukufumana isoka elitsha ngemini yokuzalwa kwakhe